The Craft: Legacy (2020) | MM Movie Store
ဟောလိုဝငျးကာလမှာ သရဲတှထေကျစာရငျ စုနျးမခြောခြောလေးတှကေို ကွညျ့ရတာ ပိုမကောငျးဘူးလားဗြာ။ဒီတဈခါတော့ စုနျးကားကောငျးကောငျးလေးနဲ့ တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။အထကျတနျးကြောငျးသူလေး လီလီ ဟာ သူ့မိခငျဖွဈသူနဲ့ အတူ ကြောငျးပွောငျးလာခဲ့ရပါတယျ။
ကြောငျးမှာတော့ စုနျးမ သူငယျခငျြး ၃ ယောကျနဲ့ ဆုံတှခေဲ့ရပါတယျ။သူတို့ကလညျး စုနျးသိုကျ ပွုလုပျဖို့ ၄ ယောကျမွောကျစုနျးကို ရှာနတေဲ့အခြိနျမှာ လီလီ့ကို တှခေဲ့ရတာပါ။မြိုးရိုးမရှိတဲ့ လီလီတဈယောကျ ဘာလို့ စုနျးဖွဈနခေဲ့ရတာလဲ?သူတို့ရဲ့ စုနျးပ့ညာ စှနျ့စားခနျးတှကေရော ဘာတှေ ဖွဈဦးမှာလဲ?
ဟောလိုဝငျးမှာ စုနျးကားကောငျးကောငျးလေး ကွညျ့ပွီး အခြိနျဖွုနျးလိုကျရအောငျဗြာ။စုနျးမလေးတှတေငျ ခြောတာ မဟုတျဘူးနျော။ ပြိုပြိုမတေို့အတှကျ မငျးသားတှကေလညျး ခြောတယျဆိုတဲ့အကွောငျး လကျတို့ပေးလိုကျပါတယျ။
ဟောလိုဝင်းကာလမှာ သရဲတွေထက်စာရင် စုန်းမချောချောလေးတွေကို ကြည့်ရတာ ပိုမကောင်းဘူးလားဗျာ။ဒီတစ်ခါတော့ စုန်းကားကောင်းကောင်းလေးနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းသူလေး လီလီ ဟာ သူ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ အတူ ကျောင်းပြောင်းလာခဲ့ရပါတယ်။
ကျောင်းမှာတော့ စုန်းမ သူငယ်ချင်း ၃ ယောက်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ကလည်း စုန်းသိုက် ပြုလုပ်ဖို့ ၄ ယောက်မြောက်စုန်းကို ရှာနေတဲ့အချိန်မှာ လီလီ့ကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ။မျိုးရိုးမရှိတဲ့ လီလီတစ်ယောက် ဘာလို့ စုန်းဖြစ်နေခဲ့ရတာလဲ?သူတို့ရဲ့ စုန်းပ့ညာ စွန့်စားခန်းတွေကရော ဘာတွေ ဖြစ်ဦးမှာလဲ?
ဟောလိုဝင်းမှာ စုန်းကားကောင်းကောင်းလေး ကြည့်ပြီး အချိန်ဖြုန်းလိုက်ရအောင်ဗျာ။စုန်းမလေးတွေတင် ချောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ပျိုပျိုမေတို့အတွက် မင်းသားတွေကလည်း ချောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လက်တို့ပေးလိုက်ပါတယ်။